इरानले खसालेकै हो त विमान ? क्यानडाका प्रधानमन्त्री भन्छन्–प्रमाण छ – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
इरानले खसालेकै हो त विमान ? क्यानडाका प्रधानमन्त्री भन्छन्–प्रमाण छ
By Digital Khabar Last updated Jan 10, 2020 14 0
ओटावा । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेऊलगायतका पश्चिमी दुनियाँका कतिपय नेताले गएको बुधबार बिहान तेहरानस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको युक्रेनको विमान इरानको मिसाइलका कारण दुर्घटनामा परेको दाबी गरेका छन् ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले त आफूसँग प्रमाण रहेको पनि जनाएका छन् । उनले इरानको गल्तीका कारण सो दुर्घटना भएको उल्लेख गरेका छन् । क्यानडा र बेलायतले सो घटनाको पूर्ण जाँचको माग गरेका छन् ।
बुधबार बिहान तेहरान विमानस्थलबाट सो विमान उड्नासाथै दुर्घटनामा परेको बताइएको थियो । उक्त विमानमा रहेका १७६ मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिनले आफूलाई कैयौं खुफिया सूत्रहरुले सो विमान इरानको जमिनबाट हावामा प्रहार गर्ने मिसाइल प्रहारका कारण भएको बताएको उल्लेख गरेका छन् ।
यो जानीबुझी नगरेको पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सो घटनाको पूर्णजाँच आवश्यक रहेको बताउँदै भनेका छन्, “क्यानडाका मानिसको मनमा कैयौं सवाल छन् त्यसैले उनीहरुलाई त्यसको जवाफ मिल्न जरुरी छ ।”
जस्टिनले अहिले नै कसैलाई आरोप लगाउनु वा कुनै नतिजामा पुग्न हतार हुन सक्छ भनेका छन् । उनले प्रमाणको बारेमा चाहिँ थप बोल्न चाहेनन् ।
विमानमा क्यानडाका मात्रै ६३ नागरिक थिए । उनीहरु सबै टोरन्टो गइरहेका थिए । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि क्यानडाका प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका छन् ।
उनले बेलायत र क्यानडा आपसी सहयोगका साथ त्यसबारेमा काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यो भन्दाअघि अमेरिकी मिडियाले इरानको गल्तीका कारण युक्रेनको विमान दुर्घटनामा परेको जनाएका थिए ।
अमेरिकी न्यूज च्यानल सीबीएसका अनुसार अमेरिकी अधिकारीले युक्रेन इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको बोइङ ७३७ विमान इरानको मिसाइलका कारण दुर्घटनामा परेको जनाएका छन् ।
इरानले चाहिँ यो आरोपलाई अफवाह भनेको छ । यद्यपि युक्रेनले संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष विमान दुर्घटना जाँचको माग गरेको छ ।
युक्रेनले मिसाइल लागेका कारण विमान दुर्घटना भएको हो कि होइन भन्ने बारेमा आफूले जाँच गरिरहेको जनाएको थियो । सो आशंकालाई यसअघि नै इरानले अस्वीकार गरेको थियो ।
इरानले जब इराकस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा मिसाइल हमला गरेको थियो त्यस लगत्तै युक्रेनको विमान दुर्घटनामा परेको थियो । सीबीएस न्यूजले अमेरिकी खुफिया विभागको हवाला दिँदै एक सेटलाइटबाट दुई मिसाइल लन्च गरिएको इन्फारेड ब्लिप्स देखिएको थियो र लगत्तै विस्फोटको पनि एक ब्लिप देखिएको जनाएको छ ।
यसैबीच न्यूजविक म्यागेजिनले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, अमेरिकी खुफिया विभाग र इराकी खुफिया विभागका अधिकारीको हवाला दिँदै सो विमान रुसमा निर्मित टोर मिसाइलसँग ठोक्किएको जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहिबार भनेका थिए,“मलाइ विमानको बारेमा शंका छ । कसैले गल्तीले खसालीदियो । ”
उनको भनाइको खन्डन गर्दै इरानले त्यो भनाई केवल अफवाह भएको जनाएको थियो । इरानको एउटा सरकारी अंग्रेजी टेलिभिजन च्यानल प्रेस टीभीले इरानको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै ट्विट गरेको छ,“युक्रेनको यात्रुवाहक विमान मिसाइलसँग ठोक्किएको भन्ने समाचार अतार्किक अफवाह हो ।”
उता एएफपीले जनाएअनुसार युक्रेनका एक मन्त्रीले इरानमा गएको बुधबार भएको विमान दुर्घटनाको विनाशर्त जाँचबुझ गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष माग गरेका छन् ।
म यस्तो गीत गाउँछु २’ गीत : ‘दुःखको काँडा’ उखेल्दै पल र पूजा (भिडियो)
धनुषामा अवैध खोला उत्खन्नको विरोध गर्ने युवकको हत्या, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध